Semalt Expert: IoT Uye Kuunganidzazve Botnets Uye Ngozi Dzakabatana Navo
Zvigadzirwa zvekugadzirisa zvinoshandiswa kuburitsa uye kutarisa mamwe mazano ekuIndaneti, akadai seDDOS (Distributed Denial of Services). Vanoponesawo nhamba yakawanda yepamupamu emakambani. Nemhaka yokuti vashandi havakwanisi kuwana pfungwa kana mucheki wekohwi anokonzera makombiyuta avo, zviri nyore kuti vaspammers vabire data yako pachayo iyo inoshandiswa pakuzivikanwa kubhakwa scams.
Nik Chaykovskiy, the Semalt Mutevedzeri weMutevedzeri weVatengi, anotsanangura kuti chinhu chakaipisisa ndechokuti vashandi vekuchera mabhuku vanogadzira mabhodesi uye vanovatengesa kune vanotengesa mabhizimusi - como hacer un portafolio de fotografia digital. Vanobva vashandisa mabhaketheni emamwe magwaro e-cybercrimes pasi rose. IoT botnets inounganidza zvigadzirwa zvinopesana, kusanganisira ma routers, DVR, makamera, makashoni anogadzika uye hutaneti hwakawanda hwakaiswa. Inonyanya kutapukirwa nemavarasi uye inoita kuti vanopikisa vatonge uye vagoita mabasa akasiyana zvose kunze kwekombiyuta uye paIndaneti. IoT dzose dzakasarudzwa dzine hurongwa hwakachengeteka hwezvokuchengetedza uye zvinhu zvakadai sezvizivikanwa zvisingazivikanwi, zvinopesana negwaro remagetsi uye zvikamu zvakagoverwa zvekuwanika kure. Vanyori vanonyanya kukanganisa zvigadzirwa kuburikidza nehutachiona hwemagetsi uye injove malware akasiyana siyana kuburikidza nematokari akazaruka kana mabasa anotambura.
Ungawana sei kana PC yako iri chikamu cheIoT kana mukohwi botnets
Zviri nyore kuwana kana kombiyuta yenyu iri chikamu chebhokisi uye iwe unogonawo kuongorora kushanda kwayo pamabasa ekushandisa kwako. Apo kombiyuta inova chikamu chebhodeni, inoshanda zvishoma nezvishoma uye haisi kuita maererano nemirairo yako. Uyezve, mawebsite haatakure zvakanaka, uye maitiro ako ekushandisa akazara nematambudziko akawanda.
Izvi zvinoshandiswa sei?
Mucheki botnets uye IoT anorayirwa kuita mamwe mabasa. Ivo ndivo vanonyanya kuve nekutora ruzivo rwemunhu wega semakadhi echikwereti uye zvingave zvisingaoneki kune vashandisi nekuda kwekunyarara kwavo. Vanokanganisa vanozivikanwa sevakmasters vanoshandisa zvikuru mabhota aya. Iro murairo uye mavhareji ekutungamirira zvinonzwisirwa kuunza pasi mabhota.
Njodzi dzinotevera dzinobatanidza nezviputi izvi.
1. Vanoita sokuti vakarurama uye vanoita kuti iwe uite basa mumabasa okufungidzira:
Njodzi dzinobatanidza nehombani dzinofanana nezvengozi dzemapurogiramu asina kunaka uye zvinhu zvinoshungurudza paIndaneti. Semuenzaniso, mabhota aya akagadzirirwa kubira ruzivo rwako pachako uye kupinda mune zvido zvekadhi rechikwereti. Vanokwanisawo kuwana mazano eunyanzvi, mazvigadziro, uye mapepasi uye dzimwe nguva anokumanikidza kuti uone pavanosangana navo kune mamwe mawebsite. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kana kombiyuta yako iine hutachiwana, haichazoiti zvinoenderana nezvaunoda asi ichaita mabasa anopiwa nehacker.
2. Hapana mutsetse pakati pemakombiyuta evanhu uye makambani nemichina yekushandisa:
Mutsetse pakati pekombiyuta nemakwikwi pachawo zvakashata. Isu tose tinogona kuva vakaurayiwa ne botnet malware, uye nzira chete yekuvadzinga ndiyo kuisa zvirongwa zvinorwisa-malware. Kuziva uye kuvhara mallow malware ndizvo zvose zvaunoda kuti uve nechokwadi chekuchengeteka kwako paIndaneti. Kubva pane maonero ehutoriki, mabhaketani anogona kumira nevanorwisa-malware kana mapurogiramu antivirus. Tinokwanisa kumira zvirwere mumutambo wekutengesa uye tinogona kuzvibvisa pakarepo.